Homomanifesto sy ny sonian'ny SGP, Van der Staaij teo ambany fanambaran'i Nashville: fampielezan-kevitra avana amin'ny avana: Martin Vrijland
Fanehoan-kevitry ny lehilahy sy ny sonia SGP mpitarika ny Van der Staaij eo ambany fanambaran'i Nashville: fampielezan-kevitra avana amin'ny avana
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 8 Janoary 2019	• 7 Comments
Miala ao kely na mpitarika SGP Kees Van der Staaij mihitsy dia tsy tena tia ny lehilahy mangingina, mazava ho azy, dia ny rotaka rehetra manodidina ny Nashville Fanambarana avana fiereny fampielezan-kevitra. Ahoana no hanao azy ianao mamorona olana, manome be dia be ny sain'ny ao amin'ny haino aman-jery amin'ny alalan'ny Fangalarana ny tena namorona rotaka, ny mpilalao ny tantara Club Den Haag ary dia manidy ny hatezerana mba tatỳ aoriana hampiditra lalàna vaovao.
Indray mandeha isika dia mahita ny farafaharatsiny Olana, fihetsika, vahaolana miasa. Ravao ny vondrona iray mba hanomezana azy ireo ny tsy fahamarinan-toetrany dia ny hevitra fototra. Mazava ho azy, efa nankatoavin'ny fiangonana ny homophilia hatramin'ny ela. Ny fiangonana dia efa lehibe izany. Fantatsika rehetra fa firy ny ankizilahy no nanararaotra ao amin'ny andrim-panjakana lehibe amin'ny lehilahy miray amin'ny lehilahy amin'ny Fiangonana mpisorona izay indray pedo. Ankehitriny isika miresaka momba ny iray hafa mazava ho azy noho ny hetsika ara-pivavahana Fiangonana Katolika, fa jereo fa mitovy ny takolany mena ny vola miditra ny Van der Staaij sy hamantatra ny mety ho miray fitiavana toy ny an'ny mpisorona (sy tia ankizilahy) Bodar Antoine. Mazava ho azy ireo fa tsy azo atao intsony amin'izao fotoana izao, saingy tsy miahy izany mandritra ny fotoana fohy aho.
Raha mamaky ny fanambarana nataon'i Nashville ianao, dia miseho im-betsaka ny mpandika teny (jereo eto). Tsy resaka momba ny zava-misy intsony fa ny olona dia tsy afaka ny ho izy. Tsy izany koa fa tsy mitovy daholo isika. Tsy midika koa izany fa tsy azo atao araka ny Baiboly izany. Momba ny anjara asan'ny tra-doza sy ny fampielezan-kevitra amin'ny transagénerisme. Izany dia famaranana mazava ho azy fa mazava ho azy fa tsy azo sarahana, satria tsy tonga amin'ny "antontan-taratasin'ny CIA" amin'ny alalàn'ny Wikileaks aho, fa fantatsika ihany koa fa tsy zavatra hafa noho ny fanoherana mifehy izany. Tokony hianatra hampiasa ny fahatsapanao mahazatra ianao, na ny fijerinao manokana. Ity dia fampielezan-kevitra mafy orina.
Manerana izao tontolo izao no ahitantsika ny fanosehana ny fanekena ny transgenderism, izay ahitana ny 'newspeak' an'i George Orwell. Midika izany fa tsy maintsy mampiasa ny fiheverana ny dikany ianao. Fahalalahana ny famerana ny fahalalahana, ny ady iraisam-pirenena dia ady; dia ohatra vitsivitsy monja amin'ny 'newspeak' araka ny fitsipiky ny bokin'i George Orwell 1984. Amin'izany fomba fijery izany dia teny mamy ho an'ny fampielezan-kevitra.
Ny transgenderism dia avo dia avo tokoa amin'ny fandaharan'asan'ny vondrona izay mitantana an'izao tontolo izao manoloana ny governemantan'ny governemantan'i Losifera (sy ny fivavahana eran-tany). Adihevitra izay efa nanomboka am-polony taona lasa izay no mihamazava hatrany. Ny transgenderism dia tokony ho lasa ara-dalàna vaovao. Ny tsy fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy (ny fomba tianao hiantso azy) dia ho lasa ara-dalàna amin'ny taranaka fara mandimby ary izany no mahatonga ny fisainana betsaka araka izay azo atao amin'ny fangatahana ny lohahevitra amin'ny karazana varotra rehetra. Ity rivo-piainana mahatsikaiky fanta-daza manodidina ny fanambarana ao Nashville ity dia ampahany kely amin'izany.
Ny marika ho an'i Losifera dia ny hoe baphomet ny bakteria hermaphrodite ambadika. Raha ny marina nanomboka famantarana lehibe ho an'ny fampielezan-kevitra ny transgender nomena ny preset harena ny Eurovision hira fifaninanana in 2014 avy Conchita Wurst (inona no amin 'ny anaran?). Izy koa dia nanana ny toetra rehetra momba ny osy hermaphrody. Nanomboka tamin'izay fotoana izay nanova ny (vita soa aman-tsara fe-potoana) fampielezan-kevitra pelaka LHBTI fampielezan-kevitra ary ny mavokely Gay Pride Rainbow Pride tampoka.
Ny rainbows dia mihamitombo tsikelikely amin'ny loto any amin'ny faritra rehetra ao Amsterdam. Ho marary mahafaty ianao amin'ny fomba manosika an'io avana io amin'ny tadiny na aiza na aiza. Tahaka ny hoe voavonjy ny vola mba hamonjena ny avana amin'ny tsimokaretina. Ary io avana io dia mazava ho azy ny mariky ny Fiaron'i Noà, aorian'ny fandringanana ny famoronana ary ny fanombohana amin'ny alalan'ireo ADN voatahiry ao amin'io Fiara io. Amin'ity indray mitoraka ity, ny ADN dia hovana ary ny ankizy amin'ny hoavy dia hampiseho toetra tsy lahy sy vavy. Noho izany dia miha-mitombo hatrany hatrany ny taranany Luciferian sy hermaphrodite. Ny fampielezan-kevitra tsy misy herisetra dia tsy hijanona intsony.
Ny hatezeran'ny fahatezerana manoloana ny mpitarika ny SGP Van der Staaij dia tsy mampiasa na inona na inona. Izy rehetra dia mihetsika manasongadina ny lohahevitra. Van der Staaij dia tsy misy afa-tsy mpilalao sarimihetsika, toy ny ambiny amin'ny sehatra politika. Ao izy ireo mba hanome ny milina fampielezan-kevitry ny fampahalalam-baovao miaraka amin'ny fihetsika. Noho izany dia mety ho tezitra ianao noho ny tsy fisian'ny 'fanekena' ny pelaka na ny mpandefitra, saingy izany dia ny vokatra izay tianao hotratrarina. Tsy maintsy mahita ny endri-panohanana rehetra amin'io fanavaozana io isika manoloana ireo olona tsy manambady. Ny lalàna rehetra hanova ny ankizy amin'ny ho avin'ny hermaphrodite dia hatsangana amin'ny fotoana fohy.
Ho avotra tsara tarehy hoavy izany, miaraka amin'ny boaty an-tongotra tsara tarehy tsy misy nono na pimps izay mividy ny akanjony ao amin'ny Hema. Tsy misy ratsy amin'izany? Zava-tsarobidy. Mbola tianao ve ny saosisy Hema?
Lisitry ny rohy loharano: beout.be
Fikambanana manohitra ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy amin'ny fikarakarana ny heterosexual
Jantje dia mahitsy ary matahotra ny hivoaka ny trano fidiovana #SorryJohan
Tags: fanekena, Malagasy, Featured, lahy sy ny vavy, Homo, lehilahy miray amin'ny lehilahy, pelaka Manifesto, Kees van der Staaij, Fanambarana nataon'i Nashville, tsy miandany, Fampielezan-kevitra, fivavahana
8 Janoary 2019 ao amin'ny 20: 03
Voalohany dia tsy maintsy nivoaka ny trano fisakafoanana ny olona tsirairay ary ankehitriny dia mihaza ny tsirairay ao amin'ny efitranony. Tezitra ny olon-drehetra ary ho an'ny tarika tsirairay izay ataony tantara tsara dia misy foana ny vondrona izay mieritreritra, eny, tsy maintsy miakatra amin'izany isika. Ny fitiavana dia mihoatra noho ny zavatra rehetra, oh eny, mahatsapa fitiavana ny pedo. Midika ve izany ny dingana manaraka eo amin'ny tohatry ny avana?
Ny mahitsy dia malaina; Ary ny mahitsy fo no itarainany.
Mila tondradrano fotsiny isika ary avy eo dia tapitra indray ny tantara, sa mbola tsy hanana endrika fampandrosoana ve ny olombelona?
Tsara ny mamaky fa ny olona ao amin'ity tranonkala ity dia somary kivy amin'ny hira iray isaky ny fotoana, fotoana mahomby ho an'ny feo hafa.
Miezaha mifantoka amin'ny hafa, satria efa adala izao tontolo izao.
Tsara ny mamela an'io sambon'ny lanitra io miaraka amin'ireo biby tsy manan'olon-tokana ary ireo olona tsy manambady. Ny fahafatesan'ny maty sy ny fihainoana tsy misy olona.
8 Janoary 2019 ao amin'ny 20: 13
Tena mitohy ny fampandrosoana ara-tsosialy amin'ny olon-dratsy amin'ny fampiasana ny fanadihadiana sy ny fanenjehana. Olona mahatsiravina izany ary mandray anjara ny andevo. Hitako fa mbola maneho fihetsiketsehana any Frantsa izy ireo. Izay rehetra voasivana any Holandy. Saingy Van der Spaaij dia miteraka fisavoritahana betsaka ao amin'ny msm. Ny zava-drehetra any Holandy dia efa miorina tsara, indrindra raha misy fandrosoana. Mazava fa tsy maintsy andevo izy io. Mianara avy any Frantsa.
9 Janoary 2019 ao amin'ny 21: 02
Soa ihany fa misy olona manohitra, ary oh eny, fitiavana aho!
9 Janoary 2019 ao amin'ny 21: 33
Hovaliana indray koa, tsapako, eny.
9 Janoary 2019 ao amin'ny 23: 46
Ny tena ratsy dia tsapanao fa tsara izany, tsy voamarina izany.
Fa raha te-hanorina avy amin'ny tabataba any amin'ny taona 10 ny zanakao, ary izany
na dia tsy voamarina aza, fa raha ny fitsipika amin'izao fotoana izao na ny alahelohelo dia lasa tonga lafatra.
Te-ho anisany aho, noho izany dia mandray tatoo aho
Te-ho anisany koa aho mba hihaino ny DWDD
Te-ho anisany ihany koa aho mba hijery sy hihaino ny Vaovao
Te ho anisan'izany aho, ka dia nijery ny Fabeltjeskrant aho
Mila mandray anjara amin'izany aho ary mila smartphone
Ny hoavy sy ny fomba hanasaraka, tsy misy ifandraisany amin'ny Gayos
(ny avana dia mijoro ho zavatra hafa tanteraka)
Te-ho tafiditra ao anatin'izany koa aho ary mamela izany eo afovoany raha izaho ankizilahy na ankizivavy
misaotra anao Hals uh maa
clairvoyance nanoratra hoe:
10 Janoary 2019 ao amin'ny 08: 43
Wilfred. Sarotra izany. Ankehitriny dia tsy maintsy maminavina isika. Amin'ny fitiavana an'i Henrik Palmgren na ny vadiny Lana Lokteff? Afaka manantena an'izany aho.
Heveriko fa tena vehivavy tsara tarehy tokoa izy, ary toy ny kirihitr'io mofo mofomamy io dia tsy hay tohaina mihitsy izy!
Nihaino ny 2013 aho ary nijery ny fampisehoana maitso mena rehetra. Niana-javatra betsaka avy amin'izany aho.
Indrisy, nianjera tao anaty harona izy ireo rehefa nanetsika ny fampahalalam-baovaon'i Xarxa an'i Kevin Barrett raha efa nahazatra azy ireo ny asa nataon'i Dr. Judy Wood.
Ary satria i Henrik sy i Lana dia tsy adala, (Lana no malemy fa tsy adala) isika dia afaka manao ny famintinana 1. (Io gisadia mena io dia nanome fahamarinana marobe tamin'ny lohahevitra hafa dia mazava tsara ny sehatra, izany no antony - ary noho ny habetsahan'ny mpitsidika - i Dr Wood dia naniry ny ho ao amin'ny fampitana.)
Google mihitsy: "Ny Radio Ice Rice dia manambatra ny 911 Disinformation Promotion Brigade."
Rohy mahaliana maro ao amin'ny lahatsoratra mifandraika, toy ity iray ity.
13 Febroary 2019 ao amin'ny 23: 30
Tokony ho afaka !!! Tsy misy fifanoherana eo amin'ny Media (= Power)
Ny tsy fitoviana vaovao dia tsy voajanahary !!!
« Ny Kim Dotcom 'famoahana ny fanjakana lalina', 'The Dark Overlord' ary fanoherana bebe kokoa
Ireo mpampihorohoro Kiorda eo ambanin'ny fantsom-bokatra mavomavo fanoherana an'i Frantsa dia niteny hoe Erdogan »
Total visits: 12.210.509